Waqooyiga Pacific Airways si ay u duusho diyaaradaha cusub ee Boeing ee u dhexeeya Mareykanka iyo Aasiya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Waqooyiga Pacific Airways si ay u duusho diyaaradaha cusub ee Boeing ee u dhexeeya Mareykanka iyo Aasiya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
La wareegitaanka Boeing 757-200s waa tallaabada ugu horreysa ee qorshaha ganacsiga Waqooyiga Pacific. Kahor intaanay soo galin adeegga, diyaaradu waxay mari doontaa hubinta dayactirka heerka C oo buuxa oo ay samaysay Certified Aviation Services LLC (CAS), oo ah hormuud dayactir, dayactir iyo dayactir (MRO) oo ku taal San Bernardino, California. Shirkadda Alaska ee fadhigeedu yahay waxay doonaysaa inay sii waddo ballaarinta maraakiibteeda marka ay isu diyaarineyso duulimaadyada rakaabka.
Waqooyiga Pacific Airways waxay oggolaatay inay iibsato lixda diyaaradood ee ugu horreeya Boeing 757-200.
Waqooyiga Pacific Airways waxay dhammaystirtay macaamilkii si ay u buuxiso qayb ka mid ah shuruudaha maraakiibta ee hore.
Diyaaraddii ugu horraysay ee cusub ee Boeing 757-200 ee iibsigaan ah ayaa si degdeg ah loo gaarsiin doonaa Waqooyiga Pacific Airways,
Toddobaadkan, Anchorage oo fadhigeedu yahay Waqooyiga Pacific Airways, oo ah shirkad iska leh FLOAT Alaska LLC, ayaa oggolaatay inay iibsato lixda diyaaradood ee ugu horreeya-Boeing 757-200s. Shirkaddu waxay dhammaystirtay macaamilkii si ay u buuxiso qayb ka mid ah shuruudihii hore ee maraakiibta. Diyaaraddii ugu horraysay ee iibsigan gudaheeda ayaa isla markiiba la keeni doonaa.
Shirkaddu waxay doonaysaa inay bixiso adeeg u dhexeeya dhibcaha Maraykanka iyo Aasiya, iyada oo loo sii marayo Anchorage, Alaska.
La wareegitaanka Boeing 757-200s waa tallaabada ugu horreysa Waqooyiga Baasifiggaqorshaha ganacsiga. Kahor intaanay soo galin adeegga, diyaaradu waxay mari doontaa hubinta dayactirka heerka C oo buuxa oo ay samaysay Certified Aviation Services LLC (CAS), oo ah hormuud dayactir, dayactir iyo dayactir (MRO) oo ku taal San Bernardino, California. Shirkadda Alaska ee fadhigeedu yahay waxay doonaysaa inay sii waddo ballaarinta maraakiibteeda marka ay isu diyaarineyso duulimaadyada rakaabka.
Ugu fiican fasalka Boeing 757-200 waxaa ku shaqeeya mataano 36-600 Rolls-Royce RB211 oo ku riixaya matoorada turbo miisaanka ugu badan ee duullimaadkiisu yahay 255,000 lbs. Diyaaradda ayaa qaadi karta in ka badan 200 oo rakaab ah duulimaad kasta oo ay u socoto, iyadoo shidaalkeedu yahay 3,915nm/-7,250km. Diyaaradda keli-socodka ah ayaa ka kharash yar duullimaadkeeda marka la barbardhigo kuwa dhiggooda ah ee ballaaran, haddana waxay leedahay baaxad ka weyn diyaaradaha kale ee cabbirka la midka ah. Muddadii barnaamijkooda wax-soo-saarka, in ka badan 1,049 Boeing 757-200s ayaa la keenay. Diyaaraddu waxay ku habboon tahay duulimaadyada dhibcaha-ilaa-dhibic, duulimaadyada dhaadheer, waxayna leedahay meel ku filan oo ay ku hanan karto rakaab kasta oo sidda.
"Waqooyiga Baasifigga wuxuu ku faraxsan yahay inuu soo bandhigo diyaaradahan xoogga badan oo ah aasaaska maraakiibtayada, ”ayuu yiri Rob McKinney, oo ah Sarkaalka Sare ee Maamulka Waqooyiga Pacific. “The Boeing 757-200 waxay naga caawin doontaa inaan gaarno kaydinta hawlgalka iyo hufnaanta annaga oo siineyna macaamiisheena khibrad safar oo abaalmarin leh. ”
Waqooyiga Pacific Airways (NP) waxay qorsheyneysaa inay bixiso duulimaadyo u dhexeeya dhibcaha Mareykanka iyo dhibcaha Bariga Aasiya iyagoo isku xiraya Madaarka Caalamiga ah ee Ted Stevens ee Anchorage, Alaska.
FLOAT Alaska LLC, oo uu madax u yahay Rob McKinney CEO, waa shirkadda waalidka Ravn Alaska, Northern Pacific Airways, FlyCoin, iyo hawlo kale oo Alaska ku salaysan.